घरमा भन्दा कार्यालयमा हेर्ने फिल्म .... - Tamang Online
घरमा भन्दा कार्यालयमा हेर्ने फिल्म ….
काठमाडौँ। घरमा भन्दा कार्यालयमा बढी पोर्न फिल्म हेर्ने गरेको अस्ट्रियामा भएको एक सम्मेलनमा खुलासा भएको छ। यौन प्रतिको नशा यति हुन थालेको छ कि कार्यालयको आधाजसो समय कर्मचारीहरु पोर्न फिल्म हेर्ने गरेको जर्मन सेक्स थेरापिस्ट डा. क्रिस्टोफले उक्त सम्मेलनमा यो रहस्य उजागर गरेका हुन्।
उनका अनुसार, “हरेक दिन करीव ६ करोड मानिस पोर्न फिल्म सम्वन्धि वेवसाइट चलाउदछन्। जसमध्ये ६७ प्रतिशत मानिसले कार्यालयमा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए”। कार्यालयमा कामगर्ने कर्मचारीहरु मध्य दुईतिहाई कर्मचारीहरु लुकेर पोर्न फिल्ममा मस्त हुने गरेको उनको ‘यौन र यौन व्यवहार’ सम्वन्धि कार्यपत्रमा उल्लेख थियो।
आधुनिक समयमा मानिसहरु यदि खुला भए कि कोठामा ढोका लगाएर एक्लै पोर्न सम्वन्धि सामाग्री हेर्न कम रुचाउदछन् र त्यो समुह दिन प्रति दिन बृद्धि भैइ रहेको डा. क्रिस्टोफको शोधले देखाएको छ। यो हुनुमा हरेक व्याक्तिसँग आफ्नो व्याक्तिगत ल्याप्टप वा पर्सनल कम्प्यूटरको बृद्धि हुनु उनको विश्लेशन थियो। जुन देशमा बढी यौन सम्बन्धि कडा कानून छ त्यो देशमा सवैभन्दा बढी यस्ता क्रियाकला हुने गरेको डा. क्रिस्टोफको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो।
« रोनाल्डो भन्दा २७ गुणा धनी र विश्वकै धनी फुटबलर हुन फइक जेफ्रि बोल्किया (Previous News)
(Next News) भारतीय संसदको लोकसभाको चुनावमा हार्दैछन् मोदी? »